Ajax, DOM, RSS, XHTML, SOAP ... အရာအားလုံး! သင်ထင်သည်ထက်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 3, 2006 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
ကောင်းပြီ ... ဒါကကျွန်ုပ်တစ်နေ့တာလုပ်နေတာကိုတွေးမိသောကျွန်ုပ်သား၏သူငယ်ချင်းများအားလုံးအတွက် SUPER BEGINNER ဘလော့တစ်ခုဖြစ်သည်။
Ajax, DOM, RSS, XHTML, SOAP, XSLT, HTML, HTTP … blah, blah, blah ။
အားလုံးဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးလား။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏စနစ်သည်ကျွန်ုပ်၏စနစ်ကိုပြောနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဘုံဘာသာစကားတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Hypertext Protocol (ကျွန်ုပ်တို့၏အသံ) နှင့် XML (သို့မဟုတ်၎င်းနှင့်နီးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာစကားဖြစ်သည်) မှတဆင့်စကားပြောနိုင်သည်။ ကောင်းပြီ, ဒါဘာကိုဆိုလိုသလဲ ကောင်းပြီ၊ ဆိုလိုတာကငါပြောတာကမင်းကိုအရင်ပြောမယ်၊ ပြီးတော့ငါအဲဒီအကြောင်းပြောမယ်၊ ပြီးတော့ငါပြောမယ်ပြီးရင်ငါပြောပြီငါပြောပြီ။
XML နှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ကောင်းမွန်သောအချက်မှာကျွန်ုပ်သည်စီးဆင်းမှုနှင့်သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုများကိုသင့်ထံပေးပို့နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုတစ်ချိန်တည်းမှာများစွာသောမှတ်တမ်းများပေးပို့နိုင်ပါတယ်:
> first_name> ကေတီ> / first_name>
> / လူတွေ>
ဒီတော့ ... ငါမင်းရဲ့ဘာသာစကားကိုပြောရင် ... ငါတို့အချင်းချင်းစကားပြောလို့ရမလား။ လုံးဝ! ဤနည်းပညာအားလုံးအလုပ်လုပ်ပုံဖြစ်သည်။ ဝီကီပီးဒီးယားကိုကြည့်ပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တော်တော်လေးရိုးရှင်းပါတယ်။ တကယ်တော့၊ ဒီ blog entry ကိုသင်အခုဖတ်နေတဲ့ပုံပဲ။ မင်းရဲ့လိပ်စာကိုမင်းရဲ့ browser ထဲထည့်ပြီးမင်းရဲ့ browser က…ဟေ့၊ Douglaskarr.com ရှိလား။ ငါကဟုတ်ကဲ့! ဒီမှာကျွန်တော့် HTML ပါ ငါ့ HTML စာမျက်နှာ (HyperText Markup Language) ရှိအမှတ်အသားများအရကျွန်ုပ်၏စာမျက်နှာဘယ်ကစတင်သည်နှင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်ကိုသင်သိသည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်ကပရိုဂရမ်ရေးဆွဲခဲ့လျှင်သင်မည်သည့်စနစ်ကိုသုံးသည်ဖြစ်စေ၊ ငါ၌ရှိသည်ဖြစ်စေအရေးမကြီးပါ။ အချင်းချင်းပြtoနာမရှိပါ။ PHP ကို ​​သုံး၍ Java, .NET, Perl, ASP သုံးသောဆာဗာတစ်ခုခုနှင့်စကားပြောနိုင်သည်။ ဟမ်? သေချာတာပေါ့, c'mon!
ငါကြီးကျယ်တဲ့ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးမင်းရဲ့ system ကိုကျွန်တော့်ကိုပြောစေချင်တယ်ဆိုရင်ငါ API or Application Programming Interface ကိုတည်ဆောက်မယ်။ ၎င်းသည်သင့်အားကျွန်ုပ်ထံမှသတင်းအချက်အလက်တောင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းကိုသင့်အား XML ဖြင့်ပြန်ပို့လိမ့်မည်။ ခက်ခဲတဲ့အသံလား မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်ဂူဂဲလ်အလုပ်လုပ်ပုံ! တင်သွင်းကိုနှိပ်ပါပြီးနောက်လိပ်စာစစ်ဆေးပါ:
http://www.google.com/search?က q = ဒေါက်ဂလပ် + karr
ဂူဂဲလ်လို့ပြောပါတယ်။ မင်းရဲ့ system (q) ကိုမေးချင်တာ Douglas Karr။ အဲဒီမှာသင်သွားပါ။ q = ဒေါက်ဂလပ် + ကာရ်! ပြီးတော့ကျွန်တော့် browser ကိုပြရန် Google က HTML တစည်းဖြင့်တုံ့ပြန်သည်။ ဟေ့ငါက # 1 ပါ Woohooo ။
RSS ကအရမ်းဆင်တူတယ် ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်တွင် RSS feed တစ်ခုရှိပြီးထူးခြားသောဂရပ်ဖစ်များအားလုံးကိုဖယ်ထုတ်ပြီးပုံစံချခြင်းနှင့်သင်ကြည့်ရှုရန်အတွက်ထိုအရာများကိုပါထုတ်ပစ်လိုက်သည်။ RSS သည် Really Simple Syndication ကိုဆိုလိုသည်။ geek သည် XMLish အချို့ကိုဖော်ပြသည်။ ယခုတွင်ငါသည်ဘလော့ဂ်ကို 'Reader' ဖြင့်ကြည့်နိုင်သည်
ပေါင်းစည်းမှုစိတ်ကူးသည်အဘယ်မှာရှိဤသည်။ ငါအကြောင်းအရာ, ဒေတာ, ဖြစ်ရပ်များ, သတင်းအချက်အလက်, စကားပြောဆိုမှုများ ... XML ကိုသုံးပြီးလုံးဝဘာမှမကူးနိုင်။ ထိုရှိရှိခေတ်မီဘာသာစကားတိုင်း XML ကိုသုံးနိုင်သည် (ဖန်စီအသုံးအနှုန်းသည်…စားသုံးရန် XML) ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ အသုံးပြုသည်။ ဆိုလိုတာကတော့ဒါကိုခွဲထုတ်လိုက်ရုံပါပဲ။ SOAP သည် XML ကိုနောက်သို့လှည့ ်၍ သွားသောအခြားနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါ့ကိုမယုံဘူးလား ဒီမှာပြောတဲ့စာမျက်နှာပါ http://www.payraisecalculator.com/getPayraise.php။ သတိထားရမှာကအမှန်တကယ်တန်ဖိုးမရှိဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတကယ်ဘာမှမ post ခဲ့လို့ပဲ။ ဒါပေမယ့်သင်ကအမှတ်ရတယ်။
ဒီတော့ဒါတွေအားလုံးကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ ကောင်းပြီ, RIA ပိုက်ကွန်ကိုယူကအများကြီးပိုမိုလွယ်ကူစေလိမ့်မယ်။ အတိုက်အခံပြုသူများက Microsoft Word နှင့် Excel ကဲ့သို့သောပရိုဂရမ်များအမြဲတမ်းရှိရမည်ဟုအော်ဟစ်ကြသည်။ တကယ်လား ဂူဂဲလ်ကော စာရေးသူ နှင့် spreadsheets? ဒါဟာရုံထောင့်ရှေးရှေးပတ်ပတ်လည်ပါပဲ။
လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀ က Personal Computer ၏တိုးတက်လာခြင်းမှာကျွန်ုပ်တို့သည် 'mainframe' system နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်မလိုပါ။ ကောင်းပြီ၊ ကျွန်တော်တို့ဟာ mainframe ကိုပြန်ရောက်လာကြပြီ။ သူတို့ထဲ၌တစ်ခုလုံးတစ်ခုသာကျန်ရှိတော့သည်။